PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Iyafuneka imbumba yomalume
Iyafuneka imbumba yomalume
Isolezwe - 2018-05-18 - EZEZIMOTO - SISHAYA AMA-HAZARD
Inselelo engiyiphonsela abantu abafana noManzini abayikhathalele impilo yomuntu omusha ukuthi kunganjani basungule umfelandawonye womalume, bahlanganisele amabhasi bese beyoxoxa nomnyango. Lokho kunganciphisa isibalo sezimoto ezincane ezidala isiminyaminya futhi uMnyango ungabahlangabeza ngemfalakahlana kwehle nejoka kubazali. Kodwa bakulindele ukuthi lokho kuzobe sekusho ukusuka kweqatha phezu kophuthu lwezingane zabashayeli bamaAvanza.
Kodwa-ke bese beqhubeka nokuthutha ngama-Avanza kodwa bengajahe nzuzo etheni ngoba ibhasi lomfelandawonye lingabe liqhubeka nokufaka imfalakahlana.
Ngakho umbono wamaHazard uthi hlangana mhlathi owazanayo komalume sithuthuke nathi singagcini ngokuba nama-Avanza. Cabanga nje emva kweminyaka seninamabhasi kuphela abe nemizila ecacile ukuthi athutha izingane eziya kuphi futhi ningazitholi senibangisa osomatekisi abathutha umuntu ngokheshi nina niqhubeke ngohlelo lomalume olucacile namanje olusebenzayo.
Zingancipha izingozi neziminyaminya sibe nembumba yosomabhizinisi abansundu kwezokuthutha izingane.
Nani bazali uma nifuna izingane ziyofunda kude kulungeleni ukukukhokhela lokho ukuze izingane zinganqwabelani ndawonye. Bazali, zijwayezeni ukuvuka ngoba nibeka impilo yezingane engcupheni ngoba kugcina sekudingeka ukuthi umalume ayidlise amagalani ezama ukukhavisa izingane zenu ezikoleni.
Hhayi-ke siyethemba ukuthi kukhona lapho siya khona uma sesinabantu abakhuluma kanjengomfo kaZungu. Sesingawavala amaHazard okwamanje bese sishayela ngokuhlonipha yonke imithetho yomgwaqo ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane nangelizayo kuyo le nkundla yokuqwashisana ngezomgwaqo.